Hupenyu kutenderera kwechigadzirwa kubva kune yekutengesa nzvimbo yekutarisa | ECommerce nhau
Hupenyu kutenderera kwechigadzirwa
Chinhu chekutanga chatinofanira kuziva ndechekuti chii Hupenyu kutenderera kwechigadzirwaSezvatinoziva, kutenderera kunoumbwa nematanho uye danho rega rega rakasiyana kubva kune rimwe, Ivo chikamu cheimwe nzira iyo, senge chero kutenderera, inopera.
Matanho ehupenyu huno kutsaurwa akapatsanurwa kuita mana
1 Nhanho dzekutenderera
2 Ndeipi nhanho yega yega yehupenyu hwekutenderera kwechigadzirwa?
2.1 Stage 1: Sumo
2.2 Stage 2: Kukura
2.4 Stage 3: Kukura
2.5 Stage 4: Kuderera
3 Ndeipi kiyi yekubudirira?
Nekuona madanho aya tinokwanisa kutora zvinorehwa neumwe neumwe, asi hazvina kujeka sezvazvinoratidzika, saka pazasi tichavaisa zvakadzama zvinoonekwa kubva maonero ebhizinesi.
Ndeipi nhanho yega yega yehupenyu hwekutenderera kwechigadzirwa?
Stage 1: Sumo
Iyi nhanho inoreva kutanga kana "kuunza" kwechigadzirwa pamusika, mune ino nhanho yekutanga mune akawanda ma brand uye zvigadzirwa ndizvo chinonyanya kukosha, nekuti kubudirira kweizvi kunoenderana ne "yekutanga pfungwa".
Mamwe matanho ari chikamu cheiyi nhanho ndeaya:
El simbisa chiratidzo uye patent; Izvi ndezve kuvimbisa mhando yechigadzirwa mukutarisana nemusika uri pedyo wemakwikwi, uye kupa unotevera mutengi kuchengetedzeka uye kuvimba.
Imwe pfungwa ndeye mutengo une nharo, kwagara kuripo marudzi maviri emazano panguva ino, kupa mitengo yakadereras kuhwina musika nevatengi kana, tanga ne mitengo yakakwira kudzorera mari yekudyara kuti vazodzikise mitengo yavo.
Sarudza iyo yakakodzera nzira yekugovera kwakanyanya kwechigadzirwaKugovera zvigadzirwa kwakakosha, chiyero icho chigadzirwa chichava nacho chinoenderana neichi, zvakakosha kuti utarise kusarudza mhando dzevagovera kana zvitoro zvinokodzera kutenderera kwechigadzirwa chako nenzvimbo dzine kufamba kukuru kwekutengeserana.
Uye yekupedzisira yeiyi nhanho, asi kwete zvishoma, yekutanga kushambadzira nekusimudzira iyo inozivisa yako inotevera chigadzirwa pamusikaZvinokurudzirwa kuti uzviitire munzvimbo inotyisa, internet. Internet ndiyo inonyanya kushanda uye ine hupfumi svikiro yekambani uye zvigadzirwa izvo zviri kungotanga kuita nzira yavo.
Chikamu 2: Kukura
Iyi nhanho inotanga kuve iyo yakadzikama kwazvo iwe uchave nayo mune yakazara Hupenyu kutenderera kwechigadzirwaMushure mekuita nhamburiko huru yekugadzira nzira yechigadzirwa chako mumusika, unofanira kutanga kuchinja marongero ako uye mafambiro, mamwe matanho aunofanira kufunga nezvawo Ndizvo:
Kutanga kudzora mitengo yako, Kunyangwe kare iwe wakatanga kupinda mumusika mukuru uye uchizvimisikidza sesarudzo yakanaka yevatengi vane mitengo inosvikika, inguva yekutanga kuvasimudza zvishoma asi kwete zvakanyanya, Zvakakosha tsvaga nzvimbo yepakati pakati pebhenefiti yako nekubatsirwa kwemutengi. Zvikasadaro, kushandisa zano remitengo yepamusoro kudzoreredza mari nekukurumidza, unofanira kudzikisaIzvi, kure nekukukuvadza iwe, zvinokubatsira iwe kusvika kune mamwe marudzi evatengi uye kuwedzera zvese zvaunotengesa, uye iwe unozotanga kuzivikanwa zvakanyanya kupfuura zvauri izvozvi.
Imwe pfungwa yakakosha ndeye chengetedza hunhu hwako kuti pakutanga iwe waunza, mumusika kuitira kuti vatengi vako vakakunda kusvika panguva ino vasakanda mapfumo pasi kuti varambe vachitenga chigadzirwa chako, iwe unogona kuwedzera imwe sevhisi kuitira kuti ive inoenderana neyakajairika kune vatengi iwe watove akakunda kubva pakutanga.
Chengetedza zvakawanda mukushambadziraKunyangwe iwe watotanga kushambadzira chigadzirwa chako mudanho rekugadzira, iwe unofanirwa kutanga nekumwe shanduko, imwe yacho iri iyo mari, inguva yekudyara mune mamwe midhiya senge kushambadza uye kuita kuti ive nenjere. Iwe unotoziva kuti vangangove vatengi vako uye uchienda kwavari unofanirwa kuenda, tarisa ako matsva ekushambadzira mapuratifomu pane iyi huwandu hwevatengi. Semuenzaniso, kana chigadzirwa chako chakanangana nevechidiki, unogona kutanga kutarisa pamapuratifomu mavanogona kushandiswa nerudzi urwu rwevateereri, senge masocial network uye kutsvaga kushambadza kunoyevedza, kune mavara, kune simba uye kupfupi, izvi mapoinzi ndiwo anobata kutariswa kwejaya iro rinokurumidza kuona netiweki dzekudyidzana maminetsi makumi matatu. Tsvaga chinonyatso kubata vatengi vako uye chishandise icho.
Sezvambotaurwa, iwe kushambadzira kunofanirwa kunangidzirwa kune vese vako vangangove vatengi, mawakatosimbisa kufarira kwavo, asi zvakakoshawo kuti ubheje veruzhinji vatsva kuti vawedzere purofiti yako. Sezvo isu tambotaura, iwe unofanirwa kuwedzera imwe sevhisi kuchigadzirwa chako chinoita kuti chiwedzere kukwezva, uye iyo poindi inozadzisa izvi, kuita chimwe chinhu chitsva kunogona kukwezva vateereri vakazvimiririra neyauinayo kare.
Chikamu 3: Kukura
Kana chigadzirwa chako chasvika panguva ino makorokoto, yakwanisa kusvika iyo nhanho yevakuru yemusikaTinogona kutaura kuti yatove nekutambura kukuru mumusika uye kuti pamusoro pemakore yakaramba yakatsiga mukutengesa kwayo. Zvigadzirwa zvakawanda panguva ino zvinotambura nekudonha kuri padhuze, asi nei? Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekumisikidzwa mumusika uye nekumisikidza nhamba hombe dzekutengesa, mhando uye kushambadzira kwechigadzirwa kunoregedzwa. Paunenge wave padanho rino, hauzongoburitse chiitiko ichi chete, unozokwanisa zvakare kuratidza hunhu hunotevera:
Makwikwi achazounzwa zvishoma nezvishoma uye zvakakosha kuti umire pakati pavo, unofanira kushandisa new hunhu hunotsanangura chigadzirwa chako uye mhando, izvi zvinoreva kuti iwe shandisa chimiro chemureza, kuitira kuti mutengi agone kusiyanisa kubva kune vamwe uye kuramba achisarudza kutenga chigadzirwa chako uye kuwana kuvimbika kwevatengi vako. Muenzaniso ungangove hunhu hwezvigadzirwa zveApple, hunhu hwakasiyana hunogara huchiita kuti titsaure zvigadzirwa zvavo.
Sezvatatotaura, iyi nhanho ndeimwe yeakanakisa, asi zvakare imwe yeakanyanya kutsoropodzaSezvo, kana iwe ukasachengeta chako chigadzirwa chiri pamusoro, danho rinotevera richava kudonha kwavo nekutsakatika kubva pamusika, uye kugara wakanyarara mumakwikwi kune zano risingakundike uye rakangwara kwazvo. Ndizvo zano rine kudzikisira mitengo yako uchienzaniswa nemakwikwi zvigadzirwaIzvi zvinokuita kuti umire pakati pevatengi sarudzo uye uzviise wega sewekutanga mukutengesa uye kufarira. Izvi zvinokubatsira kuti udzorere vatengi vazhinji vawakarasikirwa mukati meiyi kutenderera, uye pamwe unogona kutowana mamwe matsva.
Kana iwe uchida kuita kuti chigadzirwa chako chiwedzere kukwezva unogona kutanga nekushandisa "kushambadza kana kudzikisira" nzira yechokwadi yemoto yekusimudzira kutengesa kwako. Iwewo unogona kudaro shandisa kuenzanisa kushambadzira, paunofananidza makwikwi ako nechako chigadzirwa uye vatengi vanoona mabhenefiti aunopa.
Imwe pfungwa yakakosha ndeye chengetedza hukama hwakanaka nevanozvigovera nezvitoro, Izvi zvinozovabatsira kuti varambe vachikuona sesarudzo yakanaka mukutsvanzvadzira kwako, uye kwete kuti vaone zvigadzirwa zvitsva sezvavanogona kuita. Izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nekurudziro.
Chikamu 4: Kuderera
Iyi ndiyo danho rekupedzisira uye rakaipisisa pane zvese. Kana iwe usina kutarisira chimwe nechimwe chezviitiko zvakapfuura, zvingangoita kuti uzviwane uri mune ino ephemeral nhanho yenhamba dzvuku uye kuderera kusingadzivisike mukutengesa. Panguva ino hapana zvakawanda zvekuita uye iwe uchawana mamiriro akaoma zvikuru uye unofanira kutanga kufunga zvinotevera sarudzo:
Siya chigadzirwa pamusika uye tanga nekugadzirisa uye kugadzirisazve, dzorerazve chigadzirwa chako uye mubudise mumamiriro ezvinhu anotyisa aya.
Imwe sarudzo kutanga yakaderera mutengo uye mitengo yekugadziraNenzira yekuti purofiti inotanga kuwedzera kwete kurasikirwa, nekugadzira chigadzirwa chako chakachipa unokwanisa kuramba uchitengesa chigadzirwa chako nemutengo wakaderera, asi uine huwandu hwakaenzana hwepundutso.
Yekupedzisira ndiyo kutengeswa kwepaiti uye kodzero kune imwe kambaniKana iwe ukaramba kusvika pano, une imwe sarudzo yekupedzisira, kurega chigadzirwa kubva kumusika, kuchibvisa kwechinguva uye kuchichinjazve, ongorora asina kunaka uye akanaka mapoinzi woaburitsa zvakare mune ramangwana.
Ndeipi kiyi yekubudirira?
Kana iwe usiri kuda kuti chigadzirwa chako chipfuure padanho rekuderera zvakakosha kuti utarise pamatanho ekutanga matatu, gara chigadzirwa uye kushambadzira hunyanzvi.
Iwe unofanira ita tsvakurudzo yemusika uye dzidza vatengi vako zvakadzama, Tsvaga zvavanoda kana kuti vangavandudze sei chigadzirwa chako, chimwe chinhu chinogona kukununura kubva mukuderera kweramangwana.
Y usatora kubudirira kwechigadzirwa sekurerutsa, Zvizhinji zvezvigadzirwa zvinonyangarika kubva pamusika zvinokonzerwa neizvozvo, kushaya hanya nekubudirira kwechigadzirwa chako kunoita kuti zvimwe zvigadzirwa zvipfuure. Paunoona kuti unotanga kuve panjodzi, inguva yekutora matanho, usamirira danho rekudzikira.
Bheja zvachose kushambadza, kune zviuru nezviuru nzira zvekusimudzira zvigadzirwa zvako, akasiyana midhiya uye mazano mazhinji zvichienderana nevateereri vaunoda kusvika, zvakakosha kudzosera kushambadza kwako nguva nenguva kuitira kuti mubereko wevatengi usarasike.
Sarudza maawa akakodzera ekutanga kushambadzira kwako (maawa mauri uine chokwadi chekuti ako epakati vatengi vachakwanisa kuzviona), anoyevedza mavara, mifananidzo uye simba. Kana iwe ukasaregeredza chero chinhu chakataurwa, chigadzirwa chako chichagara pamusika uye uve nechokwadi icho chichava chigadzirwa chakabudirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » Hupenyu kutenderera kwechigadzirwa
/ Ungadzore sei chigadzirwa paAmazon?
Nzira yekuzadza sei Curriculum Vitae nemawebhu templates?